गोलबजारमा मेरो जित सुनिश्चित छ : एमाले उम्मेदबार श्याम श्रेष्ठ (अन्तर्वाता)
गमक पाेस्ट सम्वादाता
यहि वैशाख ३० गते हुन गईहरको स्थानिय निर्वाचन सम्वन्धमा सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाको नेकपा एमालेको मेयरका उम्मेदवार श्याम श्रेष्ठसंग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश..........
* प्रचार प्रसार कुन रुपमा अगाडी बढिरहेको छ ?
अहिले घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेका छौं । बडाहरुले पनि घरदैलो कार्यत्रंmम गरिरहेको छ । बडाले गरिरहेको कार्यक्रममा म पनि सहभागिता भई चुनाव प्रचार प्रसार गरिरहेको छु । अहिलेसम्मको अवस्था राम्रो रहेको छ । हाम्रो तयारी राम्रै भइरहेको छ । जुन ढंगले हामी मिहिनेत गरिरहेका छौं, त्यो हिसाबले पक्कै पनि जनताको साथ र सहयोग पाउनेछौं ।
* चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा जनताको घरदैलोमा जाँदा के–के प्रतिवद्धता लिएर गईराख्नु भएको छ ?
अहिलेको अवस्थामा गोलबजार नगरपालिमा विभिन्न किसिमको विकृति विसंगतिहरु रहेका छन् । उक्त समस्याको समाधान आफु जितेपछि मात्र हुने भन्दै मतदातासंग मत माँग्दैछु । खास गरी यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार लगायतको क्षेत्रमा बेथिति रहेकोले त्यसवाट मुक्त हुन जनतालाई नेकपा एमालेका उम्मेदबार श्याम कुमार श्रेष्ठलाई जिताउनु आवश्यक छ । र, जनताले यसपालि मलाई जिताउने छ भन्ने विश्वास छ मलाई ।
* गाउँगाउँमा सिंहदरवार आयो भन्ने नारामा मात्र सिमित भएको देखिन्छ, तपाईको नगरपालिमा तपाईलाई एउटा आम नागरिकको रुपमा भन्नुपर्दा के भन्नु हुन्छ ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा विगत ५ वर्षको अबधिमा गोलबजार नगरपालिकामा भन्ने लायक कुनै किसिमको काम भएको छैन । शिक्षाको स्थिति नाजुक रहेको छ, त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था त्यस्तै छ , अस्पताहरुमा औषधि छैन् । कृषि क्षेत्रमा किसानलाई अकासे पानीको भरमा खेति गर्नुपर्ने अवस्था छ, बिऊ बिजन, मलखाद्यको जहिलेपनि चरम अभावनै हुन्छ् । कुनैपनि क्षेत्रमा राम्रो काम भएको छैन् ।
* मधेशमा अहिले पनि जनतामा नेकपा एमालेप्रतिको धारणा त्यति सकारात्मक देखिदैन् नि, यस्तो अवस्थामा चुनाव जित्न सहज छ त ?
हैन, त्यस्तो केहि छैन् । एमालेप्रति जनताको भावना सकारात्मक नै छ । अहिले हामी घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा जुन रुपले जनताको साथ सहयोग पाईरहेका छौं, त्यो हिसाबले म भन्छु, एमाले थप मजबुद हुँदै गएको छ ।
* तर, मधेशमा एमालेको जनाधार कमजोर छ, मधेश विरोधी भनेर चित्रण गरिएको थियो नि ?
मधेश आन्दोलनका बेला एमालेलाई मधेश विरोधी देखाएर मधेशवादी पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेका थिए, तर त्यो सफल भएन । त्यस्ता भ्रमका कुराहरू धेरै दिन टिक्दैन् ।
*त्यसो हो भने गोलबजारवासीले एमालेलाई मतदान गर्छन् त ?
यसअघिको चुनावमा एमाले गोलबजारमा दोस्रो भएको थियो । अहिले पहिलो स्थानमा छ । सबैको आंकलन छ कि एमाले धेरै मजबुत भएको छ, गोलबजार नगरपालिकामा जित सुनिश्चित छ ।
* तपाइँलाई चुनाव जित्ने आधारहरू के–के छन् त ?
म यसअघि दुई पटक गाविस अध्यक्ष भईसकेको मान्छे हुँ । त्यसबेला मैले यस क्षेत्रमा गरेको कामहरु उदाहरणीय छन् । मैले देशभरीमा गाविस अध्यक्षहरु मध्ये आफ्नो काम कार्वाहीमा उत्कृष्ट हुदै प्रथम पुरस्कार पनि पाएको छु । र, अहिले पनि जनताकै सेवामा छु । जनताको साथ सहयोग पुर्ण रुपमा पाईरहेको छु । पार्टीको संगठन पनि यहाँ बलियो छ । यहि आधारहरुले म चुनाव जित्छु ।
* यस पटक तपाइँका प्रतिबद्धताहरू के–के छन् त ?
हाम्रा थुप्रै प्रतिबद्धताहरू छन्, जुन हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौं प्रतिवद्धता पत्रमा सडक, नाला निर्माण, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहर व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रका विकास, महिला, बालबालिका तथा नमुना नगरबनाउनु पर्ने जुन मेरो सपना छ त्यो अवस्य पुरा हुनेछ् म विश्वस्त छु , मैले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढने छु,र यो मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ ।
* अब, अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?
चुनावको मुखमा धेरै कुराहरू गर्दिन । जनताले सही गलत पहिचान गरेर मतदान गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । मेयरदेखि वडासम्म राम्रो मान्छेलाई जिताउनुपर्छ, यहि सबै मतदातालाई भन्न चाहन्छु ।